प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीको जीवनः कुलमानजस्तै प्रचण्डले अडान लिएको भए आधाबाटो हिँडिसक्थ्यौं - Ratopati
–आफैं मरेको सपना देख्दा डराएँ
–खान पनि फुर्सद छैन
–३५ सयसम्म ढाकाटोपी लगाएँ
–बिहे नभए पनि उनको सम्झना आउँछ
–युवा पुस्ताले गर्ने भूल ‘प्रेम प्रकरण’
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीलाई खानसमेत फुर्सद छैन । शनिवार केसीनिवास पुग्दा उनी लोकसेवा आयोग तयारी गरिरहेकालाई पढाउन जान लागेका थिए । विश्वविद्यालयमा इतिहासका प्राध्यापक डा. केसी सबैभन्दा बढी क्षेत्रकालाई पढाउनेमा पर्छन् । उनले सुनाए, ‘विश्वविद्यालय अलावा सशस्त्र प्रहरी, जनपद, नेपाल प्रहरी, सेना र लोकसेवा आयोग तयारी गर्दै गरेकालाई समेत पढाउँछु । त्यसले पढाउने साँच्चैको आकांक्षा पूरा गरेको छ ।’
विश्वविद्यालयमा इतिहास पढ्ने विद्यार्थी शून्यजस्तै भए पनि उनलाई पढाउन खाँचो छैन । उनले एउटै कक्षामा तीन सय विद्यार्थीसम्मलाई पढाउँछन् । पढाउन माइकको सहायता लिनुपर्छ । लोकसेवा आयोगअन्गर्तत सहसचिवसम्मलाई पढाउने उनले सेनाका कर्णेल, प्रहरीका एसपीसम्मलाई पढाउन भ्याएका छन् । त्यसको प्रभाव र प्रतिक्रिया नराम्रो नभएको बताउने ५० पुस्तकका लेखक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीसँग रातोपाटीको मेरो जीवनका लागि दीपेन्द्र राईले गरेको कुराकानी :
भन्दा फेसनजस्तो हुन्छ तर मलाई मकैभटमास असाध्यै मन पर्छ । रस (झोल) हालेको कुनै पनि खानेकुरा मन पर्दैन । जस्तो कि झोल हालेको मासु, तरकारी आदि । खानकै लागि रेष्टुरेन्ट जाने बानी छैन । स्न्याक्समा प्राइ गरेको सबै मन पर्छ तर खानचाहिँ हुँदैन । पकाउने रुचि पटक्कै छैन ।
पोसाकमा त्यस्तो धेरै खर्च हुँदैन । मलाई जे लगाउन मन पर्छ, मेरो पेसाले त्यो लगाउन सक्दिनँ । म विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएकाले सादगीलाई ‘मेन्टेन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । झिल्के, हिरो भएर हिँड्न मन परे पनि त्यो गर्न सक्दिनँ । म सस्तोमध्ये सस्तो र हेर्दा सस्तो नलाग्ने चिनियाँ कोट, ज्याकेट लगाउँछु । विदेश जाँदा युकेतिर तीनदेखि पाँच पाउन्डसम्मका ज्याकेट पाइँदारहेछन् । त्यस्ताले काम चलाउँछु ।
‘नेबि ब्ल्यु कलर’ को पोसाक लगाउन मन पर्छ । ९९ प्रतिशत कपडा सिलाएर लगाउँछु । चिनियाँ कोटचाहिँ रेडिमेड नै किन्ने गर्छु । पहिले दौरासुरुवाल लगाउँथें । टोपी लगाउन पनि सोख थियो । गाउँघरबाट काठमाडौं आउनेलाई टोपी ल्याइमाग्थें । अहिलेचाहिँ दौरासुरुवाल, टोपी लगाउनेलाई पहाडिया, प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी भन्न थालिएपछि डर लाग्न थाल्यो । त्यही भएर लगाउन छाडें । नत्र विदेश जाँदा पनि दौरासुरुवाल, कोट, टोपी लगाउँथें ।
पहिलोपटक बेल्जियम गएको थिएँ । बेल्जियमका साथीहरू तपाईंले यस्तो लुगा नलगाउँदा नै जाती हुन्छ भने । विदेश जाँदाचाहिँ यस्तै लुगा लगाउने मेरो मान्यता छ भनेर जवाफ दिएँ । अर्कोपटक बेलायत गएँ, त्यहाँ पनि त्यही कुरा आयो । कोरिया जाँदा पनि त्यसै भने । तपाईंहरूलाई नेपाली पोसाकप्रति किन यति धेरै चिडचिडाहट भनेर प्रश्न गरें । उनीहरूले भने, ‘त्यस्तो केही होइन सर, हामी गैरकानुनी तरिकाले बसेका छौं । तपाईंले जुन पोसाक लगाउनुभएको छ, प्रहरीको नजरमा झट्ट आँखा पर्छ । त्यसैले हामीलाई नराम्रो असर पर्छ । त्यसकारण अनुरोध गरेका हौं ।’ विदेशमा यस्तो र स्वदेशमा त्यस्तो समस्या देखिएपछि मैले दौरासुरुवाल लगाउन छाडें । तसर्थ, परम्परागत पोसाकप्रति त्यति चासो छैन । तर पनि संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, कालीकोट र मुगु र भोजपुरका परम्परागत पोसाक मसँग भए पनि लोकतन्त्र र उदारवादका नाममा परम्परागत पोसाक विराना भए ।
सुने पनि ‘ब्रान्ड’ प्रति ‘कन्सस’ छैन । मैले तीन हजार पाँच सयसम्म ढाकाटोपी लगाएको छु ।
यसमा मेरो ठूलो कमजोरी छ । एकदमै कम गर्छु । मलाई स्वास्थ्यमा धेरै समस्या छन्, त्यही भएर पहिले नगरे पनि अहिले डाइटिङमा छु । योगा गर्दिनँ । मर्निङवाक निस्कन्न तर यताउता जाँदा गाडी चढ्दिनँ । हिँडेरै पुग्ने गर्छु । त्यसैलाई शारीरिक अभ्यास ठानेको छु । ट्रेडमिलसँग भर्खरभर्खर परिचित भएको छु । गाउँठाउँबाट काठमाडौं आएका हामी स्वास्थ्यप्रति त्यति जागरुक हुन सकेनौ । बाध्यताले हामीलाई त्यसो गर्न दिएन ।
नेपाली इतिहास र संस्कृतिबीचमा तादात्म्यता के छ भनेर चिन्तनका लागि विभिन्न ठाउँबाट अनुरोध आएको छ । इतिहास र संस्कृति अनि नेपाली समाज नेपालको सामाजिक बनोट र मनोविज्ञान छ, जाति, जनजातिका कुरा छन्, सामाजिक सद्भावको प्रश्न आइरहेको छ । यसको तथ्य तथ्यांकमा मुलुक ‘मिसलिड’ छ । जे कुरा भनिएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । त्यही असत्यले मुलुकमा संघीयताको प्रश्न जटिल बनेको हो । असत्य बाटो हिँड्यौं भने संघीयता ठीक ठाउँमा पुग्दैन । यी सबैलाई कसरी ‘करेक्सन’ गर्ने भनेर चिन्तन मननमा छु ।
हिजोआज ठुल्ठूला मानिसका जीवनी पढ्दै छु । विश्वव्यापी जातीय सामाजिक संरचनाको जुन ‘ट्रेन्ड’ हो, त्यो के रहेछ, जैविक र लैंगिक विविधता, किन यी विभेद व्याप्त छन्, यसलाई कसरी निप्टारा लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छु । साहित्यमा बीपी कोइराला, इतिहास र समाजमा पुष्पलाल, राष्ट्रियतामा गोपालप्रसाद रिमाल मन पर्छन् । कवि भूपी शेरचन, उपन्यासकार हृदयचन्द्रसिंह प्रधान सम्झिरहन्छु ।
मैले नेपालको वामपन्थमा पीएचडी गरेको हुँ । यही विषयमा सात किताब लेखेको छु । ती सबै नेपाली लेखिएका थिए । नेपाली पाठकमाझ मेरो बौद्धिकता पस्कें, अब विदेशी पाठक पनि बनाउनुपर्छ कि भनेर उल्लिखित किताबलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरिरहेको छु । मेरो घरको पुस्तकालयमा पाँच हजार बढी किताब छन् । एकताका किताब किन्ने रुझान हुन्थ्यो, अहिले किन्नु पर्दैन । म ५० किताबको लेखक छु । त्यसैले पुस्तक पसलेसँग पुस्तक साटासाट गर्छौं । किताबमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पर्दैन ।
हिजोआज अधिकांश समय पुस्तकको मन्तव्य लेखनमा सदुपयोग गर्दै आएको छु । मन्तव्य लेखिसकेपछि पुस्तक पाउने नै भएँ । समीक्षाका लागि पनि उपलब्ध हुन्छ । दैनिकजसो आठ/दस किताब हात लाग्छ । केही समयअघि मैले एकजना प्रकाशकबाट २१ किताब एकैपटक पाएको थिएँ ।
घुमफिरमा त्यत्रो रुचि थिएन । म गाउँको मानिस भएकाले गाउँ, पाखापर्वत घुम्नैपर्नेजस्तो लागेन । विदेश जाने अवसर आउन थालेपघि घुमफिरलाई पनि अध्ययनको दायरामा ल्याउनुपर्दोरहेछ भन्ने लागेको छ । आउँदा वर्ष सेवानिवृत्त हुँदै छु, त्यसपछि एकाध वर्ष घुमफिरमा खर्चन्छु । नेपालका ५० जिल्ला पुगेको छु भने १५ देशजति टेकेको छु । घुमेकामध्ये नयाँदिल्ली मन लाग्यो । अफ्रिका, रसिया र उत्तर कोरिया घुम्न असाध्यै रहर छ । श्रीलंका पनि एकदमै राम्रो देश हो । क्राइसिस नभइदिएको हो भने श्रीलंका स्वीट्जरल्यान्ड हुने थियो । छिमेकी गलत भयो भने केसम्म हुन्छ भन्ने दृष्टान्त श्रीलंका हो । त्यसैले पनि मलाई श्रीलंका पनि पुग्ने रहर छ ।
खान पनि फुर्सद छैन । आरामबारे कल्पनासमेत गरेको छैन । जे जीवन भोगिरहेको छु, त्यो नै आरामजस्तो लाग्छ । कडा काम गर्नु पर्दैन । बौद्धिक काम गर्ने हो । फुर्सद भइहालेमा पढेर समय सदुपयोग गर्छु । घरपरिवारलाई समय दिन सकेको छैन ।
मसँग आइफोन फोर र नोकियाको सेट छन् । दुवै मोबाइल उपहारस्वरूप पाएको हुँ । अमेरिकाबाट साथीले आइफोन पठाइदिएका थिए भने बिरामी हुँदा ठूलो फोन प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो होला भनेर अस्ट्रेलियाबाट छोरीले नोकिया सेट पठाइदिएकी हुन् । मोबाइलमा फेसबुक र भाइबर प्रयोग गर्ने गरेको छु ।
टेलिभिजनमा समाचार र ‘ट्यालेन्ट शो’ हेर्ने गर्छु । ‘ट्यालेन्ट शो’ पनि सन्देशमूलक हुँदारहेछन् भन्ने भेउ पाएको छु । कहिलेकाहीं फिल्म पनि हेर्छु । सात र साढे आठ बजेसम्मको बीचको समयमा टीभी हेर्ने साइत जुर्छ । घरमा एलजी टीभी छ । पहिले सानो थियो, अहिले ३२ या ४० इन्च छ ।
साथी टीकाराम राईले डाक्टर साप कहिलेकाहीं हलसम्म पुगेर फिल्म हेर्नुपर्छ भनेर कुमारीहल लिएर जानुभएको थियो । राजनीतिसँग सम्बन्धित रहे पनि त्यो फिल्मको नाम सम्झन सकिनँ ।
स्नातक तहसम्म सुनसरीको धरानमा पढेको हुँ । त्यतिबेला रुचि नै फिल्म हेर्नु हुन्थ्यो । त्यतिबेला २०÷३० फिल्म हेरें हुँला । हेरेकामध्ये ‘आराधाना’, ‘कोरा कागज’, ‘सिन्दुर’ र ‘के घर के डेरा’ सम्झन्छु । जागिरे सेवा प्रवेश गरेपछि भोजपुर पुगें । त्यसपछि फिल्म हेर्न छाडें । भोजपुरबाट वीरगन्ज पुगें । वीरगन्जमा केही फिल्म हेरेको थिएँ ।
अहिले धेरै रोगले समातेको छ । क्यान्सरका लागि सालिन्दा ‘फलोअप’ मा नयाँदिल्ली जानुपर्छ । क्यान्सरले थाइराइड ग्ल्यान्ड फालेको हो । त्यसका लागि औषधि सेवन गर्दै आएको छु । मधुमेहको लक्षण देखिएको छ । माइग्रेन पनि छ ।
यसैपटक पहिलोपटक ‘होलबडी चेकअप’ गराएँ । यदि म स्वस्थ देखिन्छु भने गाउँघरको प्रणाली, उकाली÷ओह्राली, आमाको हातले पकाएको र घरको खाना नै हो ।
मैले अमेरिकन लाइब्रेरीबाट ‘पब्लिक स्पीकिङ’ मा ग्य्राजुएट गरेको छु । विद्यार्थीताका र स्थानीयस्तरमा नेतृत्वमा पनि थिएँ । फर्केर हेर्दा समाजले मलाई जहाँ राखेको छ, त्योभन्दा धेरै कमजोर थिएँ । तर, अहिले युट्युब हेर्नुभयो भने नेपालको सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको, उद्धरणमा लिइएकोमध्ये पर्छु । विदेशबाट धेरै प्रतिक्रिया आउँछ ।
मैले मुलुकबारे जे चासो/चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छु, त्यो चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । त्यसलाई अनलाइन म्यागेजिनले समाचार बनाउने, सेयर गर्ने गरेका छन् । मेरो अभिव्यक्तिमा जुन आक्रामकता छ, मोलाहिजा नगर्ने, निर्भयता छ, म त्योखालको नभए पनि त्यही श्रेणीमा राख्ने गर्छन् । म बौद्धिक नभए पनि जनमानसमा त्यही सन्देश गएको छ ।
भाषण गरेकै आधारमा आजसम्म विवादमा तानिएको छैन । पब्लिक स्पीकिङले जे बोल्नुपर्ने हो, ‘मास’ लाई हेरेर बोल सिकाएको छ ।
मुखमा हालेको छैन भन्ने होइन तर त्यस्तोखालको मापसे गरेको छैन । मैले कुनै पनि पेग पूरा गर्दिनँ । केवल खाएजस्तो मात्रै गर्ने हो ।
गीत/संगीत सुन्ने गर्छु । अहिले अञ्जु पन्त तहिले शम्भु राई, वास्तविकता भन्दा नारायणगोपाल मन पर्छन् । नारायणगोपालको ‘चिनारी हाम्रो धेरै पुराना भएझैं लाग्दछ’ भन्ने गीत गुनगुनाउने गर्छु ।
युवा पुस्ताले भूल गर्ने भनेको प्रेम प्रकरण नै हो । त्यसबाट म अछुतो रहिनँ । अपवादबाहेक प्रत्येक मानिसले जीवनमा यही शीर्षकमा गल्ती गर्ने गर्छन् । म त्यहाँभन्दा पर छैन । विद्यालय पढ्दा कहिलेकाहीं शिक्षकको गोदाइ खाएको छु । अरूजस्तो बाक्लै होइन । एकपटक मैले नै शिक्षकलाई दुव्र्यवहार गरेको सम्झन्छु । एकपटक शिक्षकले मलाई ठट्टाए । मैले भूल नगरी शिक्षकले मलाई ठट्टाएका थिए । भूल गरेको भन्ने भयो तर दुईतर्फी जाँचपड्ताल नगरी मलाई सजाय दिइयो ।
सुरुताका लोकसेवाका विद्यार्थीलाई पढाउँदा न्याय गरिनँ कि जस्तो लाग्यो । लोकसेवा आयोगले यति राम्रा विषय समावेश गरेको रहेछ कि मलाई थाहा भएन । लोकसेवा तयारी गर्दै रहेकाले सरले विश्वविद्यालय पढाएजस्तो पढाउनुभयो तर हामीलाई चाहिएकोचाहिँ यस्तो हो भनेर सुझाएपछि उनीहरूसँगै सिकेर आफूलाई रूपान्तरण गरेर पढाउन थालें ।
घडेरी किन्दा पुख्र्यौली सम्पत्ति खर्चेको हु । अंशबन्डामा परेको जग्गा बेचविखन गरेर घडेरी किनें । घर आफ्नै कमाइले बनाएको हुँ । २०४८ मा बनाएको घर चार लाख रुपैयाँमा ठडिएको हो ।
मेरो राशी कुम्भ हो । ग्रहदशाप्रति वास्ता छैन । ग्रहशान्ति पनि गराउँदिनँ । ग्रह नक्षत्रको फलप्रति विश्वास छैन ।
जोसँग प्रेम पर्यो, उनीसँग बिहे भएन । सामाजिक समस्याले दोहोरो प्रेम हुँदाहुँदै बिहे हुन सकेन । बिहे नभए पनि उनको सम्झना आउँछ । पछि मागीबिहे भयो ।
पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि नेपालीले दुःख पाए । एक मानिसमात्रै सही हुने हो भने दुःखमुक्तको यात्रा नेपालबाट सुरु हुन्थ्यो भन्ने कुलमान घिसिङले देखाइदिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हिजैदेखि घिसिङकै जस्तो अडान लिइदिएको भए हामी आधाबाटो हिँडिसक्थ्यौं । ती दुष्प्रवृत्ति निराकरण नै मेरो सपना हो ।
हाम्रो पालामा महत्वाकांक्षा होइन, योगदानको कदर गरिन्थ्यो । आज म जहाँ छु, यसको एक अंशमात्रै जीवनको लक्ष्य थियो । म प्राध्यापक भएको पाँच/सात वर्षमात्रै भयो । म सहप्राध्यापकसम्म हुन्छु कि भन्ने लागेको थियो । तर, प्रजातन्त्रको नाममा यस्तो दुष्प्रवृत्ति, बाढी नेपाली संरचनामा प्रवेश गर्यो, कतिखेर को के हुने, फुटपाथमा हिँडिरहेको मानिस मन्त्री हुने, मन्त्री कारागार पुग्थे भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो । मेरो बायोग्राफीको ग्राफ पनि निकै माथि पुगेको छ । मेरो सोचाइ र महत्वाकांक्षाभन्दा मैले पाएको जीवन धेरै माथि छ ।
मेरो जन्मस्थल ताप्लेजुङमा यातायात र राम्रा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न पाए लाख हुन्थ्यो । म जुन ठाउँबाट पढ्न यहाँसम्म आएँ, सायद ताप्लेजुङबाट पीएचडी गर्ने पाँचजना होलान् । आफ्नै गाउँमा परिवारबाहेक स्नातक गरेका एकाधबाहेक छैनन् । खासगरी स्थानीय मूलवासीमा शिक्षाको पहुँच र चेतना पुग्न सकेन । तसर्थ, स्थानीयस्तरमा उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षालय र रोजगारीका पूर्वाधार तयार गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म मात्रै जोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यो मेरो सपनामात्रै हो । मैले त्यस्तो योगदान दिन सकेको छैन । सम्भावना पनि छैन ।
मृत्यु वास्तविकता हो तर त्यसले धेरै नै पीडा दिन्छ । क्यान्सर अप्रेसनका लागि अस्पताल रहँदा म मरेको सपना देखें । त्यतिबेला मलाई धेरै डर लाग्यो ।
गाउँमा रहँदा गाई हेर्न गएको थिएँ । एउटा रूखको ठुटो चढें । त्यो मक्किसकेको रहेछ । म जुन ठुटो चढेको थिएँ, त्यहाँबाट तल त्यति ठूलो पहाड थियो कि म खसेको भए मेरो शरीरको एक टुक्रा पनि नरहने । म त्यहाँबाट भीरपट्टि हाम्फाल्नु र ठुटो छाँगापट्टि खस्नु एकै समय भयो । त्यसरी म बाँचेको थिएँ । अहिले सम्झँदा कहाली लाग्छ ।
आफ्नो वशमा नहुने भएकाले मृत्यु यस्तै होस् भन्ने आकांक्षा छैन । मलामीमा जुन आकर्षषण छ, त्यो कोटीमा सुरेन्द्र केसी परिसक्यो भन्ने लाग्छ । मैले जे स्नेह पाएको छु, त्यो मलाई अनौठो लाग्छ । त्यो दिन पनि मैले त्यही स्नेह पाउँछु र मलाई साथ दिन्छन् भन्ने लाग्छ ।